6.6-quake hits off PNG's Bougainville - Rule News
6.6-Dhul gariirka ku dhufan off PNG ee Bougainville
A dhulgariir xoog badan 6.6-magnitude dhuftay off Papua New Guinea ee Bougainville Island on Saturday, laakiin waxaa jiray aan lahayn wax khatar ah oo tsunami a baahsan, seismologists yiri.
Dhul gariirka, qaaddey dib uga magnitude hore sheegay of 6.9, weeraray 0104 GMT oo waxaa xuddun 59 kiiloomitir (36 miles) koonfur-galbeed ee magaalada Panguna on Bougainville at qoto dheer ah 24 kiiloomitir, ka US Geological Survey sheegay.
In ay qiyaasta hore USGS ayaa sheegay waxaa jiray suurtagalnimada hooseeyo khasaaraha iyo dhaawac.
Sida laga soo xigtay Xarunta Digniinta Tsunami Pacific-ku saleysan Hawaii waxaa jiray khatar ma of a tsunami baahsan burbur ku salaysan xog taariikhi ah.
Geoscience Australia qiyaasay gariirka ee magnitude 7.0 oo sheegay in ay u badan tahay dareemay gudahood gacan ballaaran, la iman kara ee ku kooban dhaawac ruxaya.
“Maxaa yeelay, waa sida ay dhacdo weyn waxaa macquul ah burbur ee ku yaal aagga in,” seismologist Emma Mathews sheegay AFP.
“Laakiin waa wax aan jirin ka soo baxay caadiga ah ee dalka dhulgariir-nugul oo caynkaas ah.”
Mathews sheegay in ay ahayd ugu dambeeyay ee kooxdu ay dhawaan of dhulgariir gobolka Panguna ah, shan dhacdooyinka diiwaan todobaadkii la soo dhaafay oo ay ku jiraan magnitude awood 7.6 iyo 7.5 Dhul gariirkii sababay heegan ah tsunami maxalliga ah.
jolts Kuwa ayaa gudaha dareemay laakiin ma jiraan warbixino sheegaya of waxyeello weyn ka fog oo go'doon Bougainville, kaas oo ku fadhiya oo u dhexeeya jasiiradda New Guinea iyo Solomons ah.
codad The keentay argagax magaalada Solomons ku Honiara, tiicaysa daadadka horaantii bishaan sheegay in ugu yaraan 21 nolosha.
“Tani waa arrin meesha firfircoon, aagga firfircoon tectonic in uu helo inta jeer a sare ee dhaqdhaqaaqa dhulgariir,” Mathews yiri.
Ruxmanayaan of magnitude oo kale waa caadi in PNG, kaas oo ku fadhiya waxa loogu yeero Pacific “Ring of Fire”, kulkulul ah hawl seismic sabab u ah khilaaf u dhexeeya taarikada tectonic.
Bishii Oktoobar, Dhul gariirka 7.1-magnitude a dhuftay isla aagga — wareegsan 65 kiiloomitir galbeedka Panguna.
Sanadkii la soo dhaafay ee February magaalada fog oo Lata in Solomons ah uu ku dhacay tsunami ba'an dhulgariir 8.0-magnitude ah ka dib. tsunami ayaa ka tagay ugu yaraan 10 dadka dhintay, halaagnay boqolaal guryaha iyo bidix kun oo qof oo bilaa guri.
article Tani, 6.6-Dhul gariirka ku dhufan off PNG ee Bougainville, waxaa syndicated ka AFP oo waxaa halkan fasax posted. Copyright 2014 AFP. All Rights Reserved
Philippine Airlines Casilay duulaya baalal shark iyadoo o ...
Apple ee iPhone 5S iyo iPhone 5C waa adag t ...
Dib Uubo Polar Si Minnesota Keenida Sub-Seer ...
Baby geri at zoo Buenos Aires madaxa kor ku xusan ...
13524	0 Bougainville Island, Dhulgariirka, Geoscience Australia, Xarunta Digniinta Tsunami Pacific, hordhaca ah, Papua New Guinea, Sulaymaan, United States Geological Survey
← William iyo Kate dhacay xeebta booqasho Sydney Lix dhintay, 290 la'yahay S. Korea doon Dhaleeceyno →